ယူနိုက်တက် ၊ လီဗာပူး နဲ့ အာဆင်နယ်တို့ဟာ ၂၀၂၁ မှာ အနိုင်ရလဒ်ကိုယ်စီရရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ပွဲကြိုခန့်မှန်းချက် – Premier League Special
ယူနိုက်တက် ၊ လီဗာပူး နဲ့ အာဆင်နယ်တို့ဟာ ၂၀၂၁ မှာ အနိုင်ရလဒ်ကိုယ်စီရရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ပွဲကြိုခန့်မှန်းချက်
ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း မိုက်ကယ်အိုဝင်ကတော့ ယူနိုက်တက် ၊ လီဗာပူး နဲ့ အာဆင်နယ်တို့ဟာ ၂၀၂၁ မှာ အနိုင်ရလဒ်ကိုယ်စီရရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။ ပွဲကျပ်ကာလ ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယားက အပြောင်းအလဲမြန်နေသလို ပွဲတွေကလည်း လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ကန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အိုဝင်ကတော့ ယူနိုက်တက်ဟာ သောကြာနေ့မှာကစားမယ့် ဗီလာအသင်းနဲ့ပွဲမှာ နိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖော်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ “ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအတွက် ခရစ္စမတ်ကာလ တော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ အခုဆို အဆင့် ၂ နေရာမှာရပ်တည်နေပြီး ဗီလာနဲ့ပွဲကိုသာ အနိုင်ရရှိခဲ့ရင် လီဗာပူးကိုမီလာတော့မှာပါ။ ယူနိုက်တက်က နောက်ဆုံး ၉ ပွဲကိုမရှုံးနိမ့်ထားပါဘူး”လို့ အိုဝင်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အိုဝင်က လီဗာပူးကလည်း ဆောက်သမ်တန်ကိုအနိုင်ယူပြီး ထိပ်ဆုံးနေရာကို ဆက်လက်သိမ်းပိုက်ထားမယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ကလော့ပ်ရဲ့လီဗာပူးဟာ စိန့်မေရီမှာရုန်းကန်ရနိုင်ပေမယ့် အိုဝင်ကတော့ အနိုင်ရလဒ်ရရှိသွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အိုဝင်က ၂ ပွဲဆက်အနိုင်ရရှိထားခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်ကလည်း နောက်ထပ်တတိယမြောက်နိုင်ပွဲကို ဖော်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ “အာဆင်နယ်က ဝက်စ်ဘရွန်းအိမ်ကွင်းကို သွားရောက်ကစားရမှာဖြစ်တာကြောင့် ခက်ခဲမှုတော့ အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း တတိယမြောက်နိုင်ပွဲကို ရယူသွားနိုင်လောက်ပါတယ်။ ဝက်စ်ဘရွန်းက လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာတုန်းကတော့ အဖိုးတန်သရေတစ်မှတ်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်”လို့ အိုဝင်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တဲ့ ချဲလ်ဆီး နဲ့ မန်စီးတီးတို့ပွဲမှာလည်း ချဲလ်ဆီးက တစ်ခုခုလုပြလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်နောက်ဆုံး ၅ ပွဲမှာ ၁ ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့ထားကာ အိုဝင်ကတော့ မန်စီးတီးနဲ့ပွဲမှာ ချဲလ်ဆီးအသာရသွားမယ်လို့ ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုရဲ့တော့တင်ဟမ် ကတော့ လိဒ်ယူနိုက်တက်ကိုအိမ်ကွင်းမှာ ဧည့်ခံရမှာဖြစ်ပြီး အိုဝင်က အိမ်ရှင် တော့တင်ဟမ်ပဲ အသာရသွားမယ်လို့ ခန့်မန်းခဲ့ပါတယ်။
“တော့တင်ဟမ်က နိုင်ပွဲမရတာ ၄ ပွဲအထိရှိနေပါပြီ။ တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက ဝုဗ်နဲ့ပွဲမှာလည်း သရေနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။ လိဒ်ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲမှာတော့ သူတို့ပြန်လာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်”လို့ အိုဝင်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အိုဝင်က အဲဗာတန် နဲ့ ဘန်လေတို့ဟာ အနိုင် ၃ မှတ်ရရှိသွားနိုင်ပေမယ့် လက်စတာ နဲ့ နယူးကာဆယ်တို့ကတော့ သရေတစ်မှတ်စီခွဲယူသွားမယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ပွဲကြိုခန့်မှန်းချက်တွေ ဘယ်လောက်အထိမှန်ကန်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့….
ယူႏိုက္တက္ ၊ လီဗာပူး နဲ႔ အာဆင္နယ္တို႔ဟာ ၂၀၂၁ မွာ အႏိုင္ရလဒ္ကိုယ္စီရရွိလိမ့္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းလိုက္တဲ့ မိုက္ကယ္အိုဝင္ရဲ႕ ပြဲၾကိဳခန္႔မွန္းခ်က္
ယူႏိုက္တက္တိုက္စစ္မႉးေဟာင္း မိုက္ကယ္အိုဝင္ကေတာ့ ယူႏိုက္တက္ ၊ လီဗာပူး နဲ႔ အာဆင္နယ္တို႔ဟာ ၂၀၂၁ မွာ အႏိုင္ရလဒ္ကိုယ္စီရရွိလိမ့္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းလိုက္ပါတယ္။ ပြဲက်ပ္ကာလ ပရီးမီးယားလိဂ္အမွတ္ေပးဇယားက အေျပာင္းအလဲျမန္ေနသလို ပြဲေတြကလည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ ကန္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အိုဝင္ကေတာ့ ယူႏိုက္တက္ဟာ ေသာၾကာေန႔မွာကစားမယ့္ ဗီလာအသင္းနဲ႔ပြဲမွာ ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းခဲ့ပါတယ္။
“ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္ေတြအတြက္ ခရစၥမတ္ကာလ ေတာ္ေတာ္ေလးေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ အခုဆို အဆင့္ ၂ ေနရာမွာရပ္တည္ေနၿပီး ဗီလာနဲ႔ပြဲကိုသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ရင္ လီဗာပူးကိုမီလာေတာ့မွာပါ။
ယူႏိုက္တက္က ေနာက္ဆုံး ၉ ပြဲကိုမရႈံးနိမ့္ထားပါဘူး”လို႔ အိုဝင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိုဝင္က လီဗာပူးကလည္း ေဆာက္သမ္တန္ကိုအႏိုင္ယူၿပီး ထိပ္ဆုံးေနရာကို ဆက္လက္သိမ္းပိုက္ထားမယ္လို႔လည္း ခန႔္မွန္းခဲ့ပါတယ္။ ကေလာ့ပ္ရဲ႕လီဗာပူးဟာ စိန႔္ေမရီမွာ႐ုန္းကန္ရႏိုင္ေပမယ့္ အိုဝင္ကေတာ့ အႏိုင္ရလဒ္ရရွိသြားမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အိုဝင္က ၂ ပြဲဆက္အႏိုင္ရရွိထားခဲ့တဲ့ အာဆင္နယ္ကလည္း ေနာက္ထပ္တတိယေျမာက္ႏိုင္ပြဲကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းခဲ့ပါတယ္။
“အာဆင္နယ္က ဝက္စ္ဘ႐ြန္းအိမ္ကြင္းကို သြားေရာက္ကစားရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ခက္ခဲမႈေတာ့ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တတိယေျမာက္ႏိုင္ပြဲကို ရယူသြားႏိုင္ေလာက္ပါတယ္။ ဝက္စ္ဘ႐ြန္းက လီဗာပူးနဲ႔ပြဲမွာတုန္းကေတာ့ အဖိုးတန္သေရတစ္မွတ္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”လို႔ အိုဝင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္းျဖစ္တဲ့ ခ်ဲလ္ဆီး နဲ႔ မန္စီးတီးတို႔ပြဲမွာလည္း ခ်ဲလ္ဆီးက တစ္ခုခုလုျပလိမ့္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းခဲ့ပါတယ္။ ခ်ဲလ္ဆီးဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္ေနာက္ဆုံး ၅ ပြဲမွာ ၁ ပြဲအႏိုင္ရရွိခဲ့ထားကာ အိုဝင္ကေတာ့ မန္စီးတီးနဲ႔ပြဲမွာ ခ်ဲလ္ဆီးအသာရသြားမယ္လို႔ ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။
ေမာ္ရင္ဟိုရဲ႕ေတာ့တင္ဟမ္ ကေတာ့ လိဒ္ယူႏိုက္တက္ကိုအိမ္ကြင္းမွာ ဧည့္ခံရမွာျဖစ္ၿပီး အိုဝင္က အိမ္ရွင္ ေတာ့တင္ဟမ္ပဲ အသာရသြားမယ္လို႔ ခန႔္မန္းခဲ့ပါတယ္။ “ေတာ့တင္ဟမ္က ႏိုင္ပြဲမရတာ ၄ ပြဲအထိရွိေနပါၿပီ။ တနဂၤေႏြေန႔တုန္းက ဝုဗ္နဲ႔ပြဲမွာလည္း သေရနဲ႔သာ ေက်နပ္ခဲ့ရပါတယ္။ လိဒ္ယူႏိုက္တက္နဲ႔ပြဲမွာေတာ့ သူတို႔ျပန္လာႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္”လို႔ အိုဝင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
အိုဝင္က အဲဗာတန္ နဲ႔ ဘန္ေလတို႔ဟာ အႏိုင္ ၃ မွတ္ရရွိသြားႏိုင္ေပမယ့္ လက္စတာ နဲ႔ နယူးကာဆယ္တို႔ကေတာ့ သေရတစ္မွတ္စီခြဲယူသြားမယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ မိုက္ကယ္အိုဝင္ရဲ႕ ပြဲၾကိဳခန္႕မွန္းခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္အထိမွန္ကန္ႏိုင္မလဲဆိုတာကေတာ့….
အက်စတွန် ဗီလာအသင်း သရေ တစ်မှတ် ရယူနိုင်ခြေက ( ၄၄ ) ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိနေတဲ့ ယူနိုက်တက် နဲ့ ဗီလာ ပွဲစဉ်ပေါ် သိပ္ပံနည်းကျ သုံးသပ်ချက်…
အင်္ဂလန်သားတွေကိုကျော်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အကောင်းဆုံးအဖြစ် ဖာနန်ဒက်စ်ရွေးချယ်ခံရ